Wararkii ugu dambeyay ee Suuqa Kala iibsiga Maanta %
Wararkii ugu dambeyay ee Suuqa Kala iibsiga Maanta
By Ramzi Yare	 On May 21, 2019
Suuqa Kala iibsiga ayaa Furmay kadib markii ay soo dhamaadeen horyaalada kala duwan iyada oo ay haatanba bilowdeen shaqada kooxaha kala duwan ee qaarada yurub bilaabeen isku diyaarinta iyo waliba wadahalada ay ku doonayaan xiddigaha ay doonayaan.
Waxa la filayaa in ay dhici doonaan saxiixyo waaweyn in ay ka dhacaan suuqa kala iibsiga xagaagan iyada oo ay kooxaha waaweyn si fiican suuqa u gali doonaan.
Xiddiga garabka Weerarka uga ciyaara kooxda chelsea ee Eden Hazard ayaa ku dhaw ku biirista kooxda Real Madrid iyada oo Los Blancos sugayso in ay saxiixa xiddiga ku dhawaaqdo inta uu xiddigu chelsea u ciyaarayo Finalka Europa League.
Bale ayaa u muuqda mid boorsooyinkiisa ka sii qaadanaya kooxda Real Madrid kadib markii uu Zidane si cad u qirtay in uuna xiddigu mustaqbal ku lahayn Real waliba ka mid ahayn qorshihiisa xilli ciyaareedka dambe.
Inkasta oo uu xiddigu diidan yahay in uu ka tago kooxda hadana Los Blancos ayaa doonaysa in ay iska dirto xiddiga inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Ziyech ayaa soo jiidanaya xiiso waali ah oo uu ka helayo kooxo badan oo reer yurub ah kadib qaab ciyaareedkii cajiibkii ahaa ee uu soo bandhigay koobkii Champions League waxana si weyn loogu saadaalinayaa in uu ku biiro kooxda Bayern Munich kuwaas oo wadahadalo kula jira kooxdiisa Ajax.
Da,yarka garabka uga ciyaara kooxda Bayer Leverkusen ayaa si weyn loola xiriirinayaa in uu isaga tagayo kooxda isaga oo xiiso ka helaya kooxaha Liverpool iyo Tottenham laakiin xiddiga ayaa la sheegayaa in uu ku biiri doono kooxda Borussia Dortmund.
Goolhayaha reer Costa Rica ayaa isaga tagi doona kooxda Real Madrid kadib markii loo sheegay in uuna ka mid ahayn qorshaha tababare Zidane ee xilli ciyaareedka dambe.
Xiddiga ayaa lala xiriirinayaa in uu ku biirayo kooxda Fc Porto sida ay sheegayaan wararku.
Marcelo ayaa ah xiddig kale oo Real Madrid ah oo uu shaki ku jiro mustaqbalkiisa xilli ay wararku la xiriirinayaa kooxda Juventus kuwaas oo doonaya adeegiisa inta lagu jiro suuqa xagaaga.
Daafaca reer Holland ee Matthijs de Ligt ayaa si weyn loola xiriirinayaa kooxo badan oo reer yurub ah laakiin xiddiga ayaa ugu cad-cad in uu ku biiro kooxda Barcelona xagaagan.
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Lyon ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku jira xilli ciyaareedkan waxana uu xiiso ka helayaa kooxo badan oo reer yurub ah kuwaas oo doonaya adeegiisa laakiin Kooxda PSG ayaa ugu cad-cad in ay helaan adeegiisa xagaagan.
Pogba ayaa si weyn loola xiriirinayaa in uu ka tagayo kooxda Man United iyada oo lala xiriirinayo kooxaha Real Madrid iyo Juventus waxana heshiiska xiddiga ugu cad-cad kooxda Los Blancos.
Xiddiga reer France ee Adrien Rabiot ayaa xiiso ka helaya kooxo badan oo reer yurub ah kuwaas oo doonaya adeegiisa inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga isaga oo waliba si xor ah ugu biiri kara kooxaha uu doonayo waxana lala xiriirinayaa kooxaha Juventus, Arsenal iyo waliba kooxo kale oo reer yurub.
Xiddiga Christian Eriksen ayaa diirada u saaran kooxda Real Madrid waxana si weyn loo saadaalinayaa in uu ku biiro kooxda Real Madrid inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Xiddiga 27 jirk ah ee reer France ayaa xaqiijiyay in uu isaga tagayo kooxda Atletico Madrid inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga iyada oo si weyn loola xiriirinayo kooxda Barcelona kuwaas oo doonaya adeegiisa tan ilaa xagaagii hore.
Duminta masaajid kuyaalo spain iyo jawaab celintii ka timid laacibka kubada cagta ciyaaro